HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraLọ ndị Turkey nwere ndị ọbịa
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Mgbasa ozi, Turkey 0
turkish ụdị nke ndị ala ọzọ
ANYA OIL: Yıldız Holding ererela Ajinomoto Japanese na akara anyị na 2016.
COLA TURKA: 2015 resịrị tolker nye Japanese Dydo DRINCO.
MILK: Ndị French Group Lactalis rinụrụ.
SANA OIL: E resịrị ya na Unilever, onye mmekọ England na Dutch.
ÇAMLICA GAZOZ: E resịrị 2015 ụlọ ọrụ Japan Dydo DRINCO.
DAMLA SU: Ọ bụ ugbu a bụ akara nke Coca Cola.
Mmiri Plum: Nestlé nwetara na 2006.
ESKIPAZAR: Eresịrị 2015 ụlọ ọrụ Japanese Dydo DRINCO.
KOMILI OLIVE OIL: E rere 2017 nye Koninklijke Bunge BV.
SAKA SU: 2015 ka Ülker resịrị Japan Dydo DRINCO.
Mmiri SIRMA: 2013 bụ ụlọ ọrụ French Danone nwetara ya.
YRSAN: Na 2013, Dubaili ghọrọ Abraaj Group.
YUMOŞ: Ghọrọ akara nke Unilever jidere na UK na Netherlands.
HAYAT SU: French sonyere Danone.
AKMINA: Egoro onye ulo oru French di Danone.
YEDİGÜN: Amamịghe nke ụlọ ọrụ America Pepsi Co.
AKFKỌ ITYBỌR: CITY: Cadlọ ọrụ British Cadburry bụ.
AKWİKWỌ FİLİZ: E rere 2003 nye Bartali Barilla na.
NUHUN ANKARA Pasta: Ọ ghọrọ onye mmekọ na Nisshin Nri na Japanese na Marubeni Corporation na 2014.
EGO: Ọ bụ ụlọ ọrụ Dutch.
UNO: Ọkara nke UNO dị na Spanish Vedanta Equity.
NKWU: 2014 esorola Bahrain Investcorp mee.
BANVIT CHICKEN: Ndị Brazil BRF na Qatari Qatar Investment Authority na 2017 nwetara ya.
CP ọkọlọtọ: Otu sitere na Thailand na-enweta ya.
OKWU OLTAN: Ọ bụ onye Fertali Ferrero zụtara ya.
KEMAL KÜKRER: 2013 meriri Ajinomoto ndị Japan.
ANYA KITCHEN: Soro ụlọ ọrụ Japanese Ajinomoto.
SWALLOW, SEZAİ ÖMER MADRA mmanụ olive: Ọ bụ ndị America.
FALIM SAKIZ: E resịrị ya ụlọ ọrụ British Cadburry.
Mkpụrụ PEYMAN: companylọ ọrụ Bridgepoint zụtara.
Jelly Confectionery: Ọ bụ nke ụlọ ọrụ Britain Cadburry.
EGO BASKET: Eresịwo ụlọ ọrụ ahụ, nke Nevzat Aydın hiwere, ka e zigaara ya nye Herolọ Ọrụ Mbata German.
IPEK SHAMPOO: Ọ bụ nke ụlọ ọrụ French L'Oréal.
HACI ŞAKİR: Bdị nke ụlọ ọrụ American Colgate.
Nwere ike omume: Ndị ụlọ ọrụ Belgium dị na Ontex.
MADO: Ọkara n'ime ha bụ ndị Qatari.
BEYMEN: have nwere ndi Qatar.
Nke TEA: Jacops nwetara ya.
Gitti gara: eBay rere GittiGidiyor nye ụlọ ọrụ America na 2011.
TURKCELL: Ndị ọrụ mmekọrịta kachasị n'etiti Turkcell bụ Russian Altimo na Swedish TeliaSonera.
Blọ akụ TEB: Ndị ụlọ ọrụ French banki BNP Paris nwetara ya na 2005.
PROFILO: Ngwunye ụlọ nke Bosch na Siemens kemgbe 1995.
ATASUN OPTİK: Onye sitere na Dutch, sonyeere ụlọ ahịa ndị si mba ọzọ.
VIKO: Ndị Japan zụtara Panasonic.
BAYMAK Kombi / Geyser: Dutch BDR bụ Thermea.
SEBA MED: Ihe ika Germany.
ERKUNT TRACTOR / Ankara na HİSARLAR MAKİNE / Eskişehir: Ọ ghọrọ ụlọ ọrụ ndị India Mahindra.
MNG CARGO: E resịrị Dubaili MIRAGE CARGO nye B.V.
TEKİN ACAR ịchọ mma: French Sephora ịchọ mma Inc. Ọ natara.
OKPUKWU OIL: E resịara ụlọ ọrụ Dutch.
EGE TAV: Ndị Japan zụtara ya.
Filli Boya, Ulusoy Electric, Kamil Koç, wdg, ọtụtụ ụdị ụlọ anyị na nke mba anyị nyefere n'aka ndị mba ọzọ.
“Ala bụ nke anyị, ogige ahụ bụ nke anyị, mmiri bụ nke anyị, anụ ahụ bụ nke anyị, mmiri ara ehi bụ nke anyị, ntụ ọka bụ nke anyị, mmanụ bụ nke anyị, ndị ọrụ na ndị ọrụ bụ nke anyị, mana ụmụ nwoke na-abịa na mba anyị, na-eburu ngwongwo anyị, na-eburu anyị, kwakọ ngwaahịa ahụ, kpoo ọnụ ahịa ma resị anyị ya ọzọ. . "
Ngwaọrụ Họrọ Machine na Kacha ọhụrụ na Ebube Ugbo 25 / 05 / 2018 Solentek, nke na-arụgharị ụgbọ ala na akụkụ maka mpaghara ụgbọ okporo ígwè ụwa, na-eme atụmatụ ịmegharị welding na njirimara dị mma site na iji ígwè ọrụ ugbo. Amm N'iji ígwè arụ ọrụ, a ga-akwụ ụgwọ ahụ n'oge ọbịbịa, M wee sị Muammer Abalı, Onye isi nchịkọta ụlọ ọrụ ahụ. Solentek na-arụ ọrụ na Bursa Nilufer Organised Industrial Zone na 9 puku 200 square mita mmepụta mpaghara na ya na nkà na ụzụ akụrụngwa chọrọ site oge na usoro okporo ígwè na ebe nhazi ígwè. Ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa maka nchọpụta R & D maka usoro ụgbọ okporo ígwè ndị kachasị dị na mba anyị. Ahụmahụ na ike ọrụ mkpara ...
Tüdemsaş nwere ebe dị mkpa na ụlọ ọrụ Turkey 08 / 10 / 2012 Selim Dursun, onye a họpụtara dịka onye ndụmọdụ na Ministry of Transport, Maritime Affairs na Communications site na ọnọdụ nke Tüdemsaş General Manager, malitere ọrụ ya dịka Onye isi na onye isi oche nke TUDEMSAŞ na 10 / 05 / 2011. / 02 ụbọchị na 10 / 2012 na mkpebi nke Ministry of Transport, Maritime Affairs na Communications ka a họpụtara dị ka iwu nke Ozi. 28429 akụkọ ihe mere eme kwa afọ ma nwee ebe dị mkpa na Ahịa Ahịa, enwere m nnọọ obi ụtọ ịrụ ọrụ na nzukọ a. Site n'ịbawanye usoro na ịrụ ọrụ dị na ụlọ ọrụ anyị n'oge m nọ na ọrụ anyị niile karịa ...
Erciyes Ịghọ ebe maka ụdị 03 / 04 / 2015 Erciyes Ịghọ ebe maka ụdị: Ọkachamara onye na-ahụ maka ndị na-agba ọsọ ụgbọ ala Austrian bụ HEAD ahọrọwo Erciyes dịka ntọala nkwado ngwaahịa 2015-16 n'oge oyi. Kayseri Metropolitan Municipality na Municipality mere na ego ma mejuputa ugwu management nlereanya na oyi egwuregwu na-otu n'ime ndị kasị mkpa adreesị Erciyes Winter Sports na Tourism Center, ekele mba asọmpi dị ka ụsụụ ndị agha malitere ya n'etiti mara skai ntụrụndụ na ụwa. Ihe ndị a ma ama nke ụwa nke na-enweghị ike ịghara inwe mmasị na ịrị elu a ugbu a na-ewepụta ngwaahịa ha n'aka ụwa site na Erciyes. Onye na-emepụta ngwá ọrụ ski sistemụ kachasị dị mkpa nke ụwa, nke tọrọ ntọala n'Austria na 1950, kwukwara na ngwaahịa 2015-2016 n'oge a.
AKWỤKWỌ NDỊ ANYỊ NA-ECHICHE ALWAYA: Tram bụ mpaghara kwuru na 'İpekBöceği' dị mma karịa ụwa ama tram ụdị 06 / 07 / 2012 Turkey mbụ obodo tram 'Silk ebe nke ụwa na-ama tram, na-egosi na elu mma karịa ika Bursa Mayor Recep Altepe,' Anyị nwere ike ime nke a ọrụ 2,5 afọ. Anyị na-eme trams, ụfọdụ n'ime ha na-asụkwa mkpọda ahụ. Na Switzerland, tram na-arịgo ugwu ahụ. Anyị ga-anọ ebe a? Bursa industrialists Hilton Hotel Metropolitan Mayor Recep Altepe-abịa ọnụ, ụwa bụ agaghịkwa ke mbuba nke obodo, o kwuru na e nwere oge maka Turkey imefusị oge. N'ịkọwa mkpa nke Bursa ịmepụta ngwaahịa na ụdị ọhụrụ, Altepe kwuru, sị, 'Anyị kwesịrị ịzụlite nkà na ụzụ anyị ma mee ka anyị nwee ọganihu. A na-eto eto Genç
Alizşan Logistics zutere na ụdị ụwa dị na Logitrans Transport Logistics Fair 20 / 11 / 2012 Buying Logistic Transport Logistics Fair met with worldwide brands Logitrans Transport Logistics Fair, nke na-eweta ọnụahịa ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na mpaghara ọnụahịa nke mba ndị na-asọmpi n'ahịa mba ụwa na ndị dike ụwa; 15 - 17 nọ na Istanbul Expo Center tinyere òkè nke ndị 2012 dị n'etiti November 14.000. Na "Logitrans Transport Logistics Fair" nke a nabatara dịka ọrụ kachasị nke ahịa ahịa; N'okpuru mmanya a na-ahazi maka ndị ọbịa na ndị na-agụ òtù ndị Alışan Lojistik; Emere ngosi na mbinye aka nke nzukọ azụmahịa nke Alışan - Interbulk nwere. Logitrans Transport bụ otu n'ime nzukọ ndị dị mkpa na mpaghara nchịkọta.
Ngwaọrụ Họrọ Machine na Kacha ọhụrụ na Ebube Ugbo
Tüdemsaş nwere ebe dị mkpa na ụlọ ọrụ Turkey
Erciyes Ịghọ ebe maka ụdị
AKWỤKWỌ NDỊ ANYỊ NA-ECHICHE ALWAYA: Tram bụ mpaghara kwuru na 'İpekBöceği' dị mma karịa ụwa ama tram ụdị
Alizşan Logistics zutere na ụdị ụwa dị na Logitrans Transport Logistics Fair
Ụdị Nlereanya na InnoTrans
Ụyọkọ n'azụ ụdị ụwa niile
Traktọ xnumx.el TürkTraktör brand na Turkey na institutionalized
Ugboro puku nke 3 na Ụdị Ala Ọzọ Agafere Flag Turkey
Erciyes Ski Resort ghọrọ ọkacha mmasị nke ndị ala ọzọ na-ekele ntụrụndụ omenala